Calorie "McDonald": ukubaluleka amandla izinto ezisemqoka - hamburger, amazambane athosiwe, ibhulakufesi kanye iziphuzo
ukudla okusheshayo iyisibusiso sangempela kulabo abahlala okusheshayo kuhambisane nesivinini sokufunda komfundi, njalo iqhubekela phambili futhi alinaso isikhathi ukudla okugcwele. Ngakho-ke, amathilomu ezincane lapho ungakwazi okusheshayo ukuluma futhi bashesha emuva emsebenzini, ukufunda noma umane ebhizinisini, zihlale funa. Ngoba kufike umuntu mumbe la izikhungo zihlanganisa "McDonald", okuyinto babathanda kakhulu abafundi esikoleni ekolishi NGAMAFUPHI - intsha. Abantu ubambe izikhundla eziphakeme noma abacebile kusilinganiso, ngeke ubone e izikhungo ezifana, bakhetha yokudlela ezingeni eliphakeme futhi nge gourmet ekhishini. Futhi abantu abasha ezifana "McDonalds" amanani aphansi, imenyu ezihlukahlukene nensada okumnandi futhi eqotho.
Calories ungabali ... Futhi uma namanje uzame?
Ukujabulela amazambane athosiwe ne umhluzi, bambalwa abantu abacabanga okuqukethwe ikhalori "McDonalds", futhi le nkinga sibi kakhulu futhi ezithakazelisayo. Okuqukethwe eyinhloko cishe zonke sandwich, futhi uvakashele ikhadi kwalesi sikhungo kukhona inyama patties, iziphi ethosiwe e semali samafutha zemifino. Yingakho kukhona kakhulu okunama-kilojoule amaningi. Bonke abanye ukudla kungukuthi emuva. Wazi kanjani ukuthi mangaki ama-calories umkhiqizo othize, kudliwa cafe? Phatha ukudla kwakho kusiza ithebula ikhalori "McDonalds", okuyinto ungakwazi ukubuza izisebenzi ukuthatha esitolo ikhofi noma ehhovisi ibhokisi. Liqukethe ulwazi mayelana nokuqukethwe ikhalori izitsha etholakalayo ku imenyu, kusukela sandwich ziphethe kophudingi nososo. Amandla ukubaluleka iziphuzo ezibhalwe ku-izinkomishi. Ngakho-ke, self-service kwasemini ngesikhathi cafe, ungakwazi kalula abale isibalo kudliwa amaphrotheni, amafutha kanye carbohydrate.
Zicabangele ngokucophelela kilojoule
Wonke umuntu uyazi ukuthi okuqukethwe ikhalori "McDonald" mikhulu, kodwa bambalwa bayazi kahle mangaki ama-calories we kwasemini ejwayelekile kule ndawo futhi kungani ke ecebe kangaka. Ake sibheke ingxenye idina okunemibandela ku "McDonald" futhi abale okuqukethwe kwayo caloric. Ngokwesibonelo, uma imenyu yakho siqukethe isaladi "uKhesari" eyodwa (ejwayelekile) amazambane isitokwe izingxenye, isangweji "Big Mac" ikhofi "Cappuccino", inani kilojoule Isetshenziswa kwaba 1190 kcal (250 + 340 +495 + 105 kcal, ngokulandelana) . Uma, ngaphezu idina standard, nawe pamper ngokwakho dessert "Makflurri" nge amabhola of irayisi abakhukhumele, bese ufaka isibalo yangaphambilini ye 340 kcal ngaphezulu, bese ijika inani 1530. Futhi lena ukulinganisa izinga yansuku zonke engayitholi caloric umuntu ovamile, ukuthi imayelana okuningi udinga ukusebenzisa usuku lonke, hhayi ukudla ngamunye.
Sasekuseni e "McDonald" nokuqukethwe kwabo ikhalori
Kulesi esheshayo-service amathilomu kungavela ngesidlo sasekuseni. ethandwa kakhulu kakade iyawakha kwasekuseni "McDonald". Imenyu, okuyinto caloric futhi enkulu ngokwanele, iqukethe "Isidlo sasekuseni Big" (640 kilojoule), ibhulakufesi, ehlanganisa "McMuffin" kabili ne iqanda ingulube cutlet (615 kcal), kungenziwa yayala kwasekuseni "McMuffin" ne iqanda ubhekeni, equkethe 305 kilojoule. Zonke iziphuzo kumele uthenge ngokwehlukana futhi wanezela ngisho esincane kilojoule kwimenyu enkulu. Ngokwesibonelo, ingilazi isigamu-litre ethandekayo Coca-Cola iqukethe 210 kilojoule.
Calorie "McDonald": amaqiniso athakazelisayo
Omunye sandwich intandokazi yami izivakashi iyona Burger evamile, esakhiwa Steak yenkomo kanye imiqulu, ephelele ikhukhamba zifakwe emanzini anosawoti bese aphume isoso kanye lwesinaphi sauce. Omunye bakhonze lesi sidlo iqukethe 255 kilojoule - mhlawumbe lena kakhulu -kilojoule amaningi dish inyama, alinikela lokhu edayisa ukudla okusheshayo. Kodwa-ke ukuthi luselude, kulokho elikulo okungenani has isiphuzo, udle ukudla abandayo ngoba lokhu ngokuvamile udla amasemishi. Kulula ukubona ukuthi kungani ikhalori "McDonald" uphakeme kakhulu. Kakhulu okune-calorie ku imenyu ezibhekwa hamburger, cheeseburgers nezinye sandwich. Zakhiwa a cutlet inyama noma iqatha lenyama ethosiwe, okuyinto phama Muffin okumnandi. Ukuze ukunambitheka iqukethe ungqimba wenza kusuka imifino, amahlamvu ulethisi, tincetu ushizi noma nezinye izithako. Konke lokhu ndawonye ukunika isidlo caloric kangaka. Futhi nakuba Burger siqukethe kuphela yonke inyama noma inyama nengulube (ngokuvumelana umenzi) futhi ayinazo izithasiselo ezilimazayo noma amakhemikhali, kodwa unezela ikhalori hamburger Bun. Inhlama bayobhaka enkulu ekwakhekeni ushukela owenezelwe lokho, onikeza it nice brown yegolide kanye ukunambitheka kancane elimnandi. Kule roll kuyinto ngisho ethambile futhi tastier, kodwa inani kilojoule ushukela kwandisa kuphela.
Enye indlela eya ekudleni "McDonald": indlela "londoloza" kilojoule
Nokho, naphezu high value caloric izinto ezihlongozwayo kwimenyu, "McDonald" uhlale egcwele abantu. Abantu bayayithanda le cafe ngentengo low kwentando yenengi nokwehluka. Ngaphezu kwalokho, kukhona ngokuvamile ezihlukahlukene izenzakalo, futhi izivakashi uthole ajabule futhi imizwelo eyakhayo. Yiqiniso, nsuku zonke ukuze adle kule cafe akufanele ke, sekushiwo ukuthi ukudla ikhalori ku "McDonald" kuphezulu kakhulu - kuyingozi ngoba lesi sibalo, kanye nezempilo lokhu kudla nje musa ukwengeza. Kodwa uma ufuna ngempela ke, ngezinye izikhathi ungase zithokozise isemishi noma okuthosiwe. Into esemqoka - ungaphuzi konke amnandi ezinegwebu iziphuzo. I "McDonald" has ongakhetha eziningana ikhofi kanye omnyama green tea. Ziyakwazi aphansi in kilojoule kuka Cola noma cocktail. Futhi, esikhundleni fries for isidlo, ungakwazi ukukhetha isanqante izinti, fresh zemifino isaladi, noma ngokuthenga yimiphi amabhega, udle namabhanisi uhhafu kuphela (ngaphandle phezulu). Lezi amaqhinga alula kuyokusiza ugcine ethile kilojoule, ngoba isisindo esengeziwe omthemba ndawo.
Abahlukile futhi ezingavamile erythronium uju njengoba zemithi yemvelo
Irayisi Basmati: indlela ukupheka kahle. Basmati pilaf
Blanching - lena ngenye yezindlela imikhiqizo ukwelashwa ukushisa
Umphimbo obuhlungu ezinganeni (iminyaka engu-3): Ukwelashwa. Angina ingane iminyaka engu-3 ubudala: lokho futhi indlela yokuphatha
Ukufakwa kahle kwe-polycarbonate: wandisa impilo yesakhiwo
Izindlela zesimanje ekubhujisweni. izici Chemical. Ezithinta izici zasezindaweni ezihlukahlukene
Ibhasiki lezinathoyizi ngezandla zabo. Ubuciko obuwusizo
Hhayi ekhaleni vysmarkivaetsya akuyona ifakwe - yini okumele ngiyenze?
Calorie coho, izakhiwo ewusizo, ukulungiselela
Indlela yokwenza wokuciba ngezandla
Sifundela geography. Likuphi Nice? Ngiyiphi inarha lapha?